Varotra: fiara vaovao 3 000 isan-taona ny lafo | NewsMada
Varotra: fiara vaovao 3 000 isan-taona ny lafo
Mandeha ny varotra fiarakodia vaovao sy efa niasa eto Madagasikara na lazaina aza fa isan’ny firenena mahantra indrindra. Manodidina ny 2 900, 3 000, 3 100 isan-taona ny fiarakodia vaovao lafo, araka ny nambaran’ny solontenan’ny Vondrona mpivarotra fiarakodia eto an-toerana. Tokony mbola hiakatra io tarehimarika io, saingy tsy ampy ny fampiasam-bola eto amintsika, noho ny fahatahorana fisian’ny krizy politika.
Tsara toerana ny varotra fiarakodia efa niasa, 7 000 isan-taona eo ho eo, nefa varotra fifaninanana tsy ara-dalàna no betsaka. Tsy manao filazana ny ankamaroan’ireo mpivarotra na mpanelanenana, tsy mandoa haba sy vola hafa tokony ho an’ny fanjakana izy ireny. Tsy hita loatra ny fandraisana andraikitra ataon’ny fanjakana hanasaziana ireo mpivarotra fiara efa niasa ireo nefa tsy mandoa haba sy hetra.
Efa mitady fiaraha-midinika momba izany amin’ny fanjakana ireo Vondrona mpivarotra fiarakodia vaovao. Mampiditra vola ho an’ny fanjakana ireo Vondrona ireo ka raha matiantoka ireo, very vola ny fanjakana, araka ny fanamarihana nataon’izy ireo. Efa fanao eto amintsika izao ny « Salon de l’Auto », fomba iray hampahafantarana bebe kokoa ny varotra ny fiara sy ny mombamomba izany.